Indlela yokufundisa umntwana ukuba abelane ngayo?
Xa kukho abantwana abaningana kwintsapho, ingxaki "yepropati" iyancipha. Ngokukodwa ngokuqhelekileyo kwenzeka ntoni xa umahluko phakathi komntwana omncinane nomntwana omdala akakhulu mkhulu: umzekelo, umdala ovela kwiminyaka emi-2 ukuya kweyine, kwaye omncinci uneminyaka emithandathu kuphela ubudala. Umncinane, ewe, ufuna ukuthinta izinto zomntakwabo okanye udadewabo, kuba kunomdla kakhulu, kunomdla kwaye kungavamile, kwaye umdala unomdla kwaye akafuni ukwabelana naye. Umncinci akakwazi ukucela umdlalo ngokwakhe, kodwa umdala akayiqondi isizathu sokuba azinikele izinto zakhe, okanye nje akafuni ukwabelana naye. Kwixesha elinjalo, phakathi koonyana kuqala umzabalazo wemfuno kunye nabalinganiswa. Enyanisweni, ngexesha lokungaboni phakathi kwabantwana nabazali, akuyi kuba lula, kodwa kufuneka kuqondwe ukuba iinkqubo ezinjalo zigalela ekuphuhlisweni kweintsana. Abazali akufanele batyeke ixesha elinjalo ebomini babantwana babo baze bacinge ukuba abantwana bazinyamekanga kwaye bangathobeli. Kufuneka kuqondwe ukuba ukhethe amathoyizi omnye komnye, abantwana bafunda ukwabelana ngezinto ezixabisekileyo ngokwabo, bafumane ulwimi olufanayo kwindawo evaliweyo, kwaye baqale ukuqonda ukuba abazali bangabantwana bodwa kwintsapho, kodwa kubini bobabini. Xa abazali bancedisa abantwana babo ukuba basombulule iingxaki ngokuthula, bafundisa, bebonisa ukuba izalamane zazo zifanele ziphile ngokuvisisana kwaye zifumane ukunyaniseka.
Ngamanye amaxesha, ngokuqinisekileyo, iimpikiswano phakathi kwabantwana zifikelela ezigqithiseleyo kangangokuba nabazali abazi ukuba baphume njani kwimeko ngokuchanekileyo. Isigqibo esona sichanekileyo abazali abanokuyithatha ngexesha lokuxabana kwabantwana kukuba banqunyulwe kumazinga okuqala ukuze bangangeni kumkhwa. Ngenxa yesiphumo esihle, kufuneka uhambelane namanqanaba ambalwa, esiya kucinga ngawo ngoku.
Isigaba sokuqala: ukunciphisa ubunokwenzeka beengxabano kunye nokungavumelani phakathi kwabantwana, kuncinci kakhulu. Xoxa nomntwana omdala ngesihloko semidlalo kwaye, ukuba kunokwenzeka, bahlule kwizinto ezinokuthandayo kwaye zithandekayo kuye, kwaye loo mayeza amancinci angayithatha.
Zama ukuqinisekisa ukuba kunye neentshukumo zakho ezithandayo, umntwana omdala udlala apho omncinci akayi kubona kwaye akakwazanga ukuthatha. Umzekelo, cwangcisa ikona yokudlala kwelinye igumbi, okanye livumele lidlale ngexesha xa umncinci elele.
Lezo zixhobo ezingakwazi ukuphulwa okanye zonakaliswe, zifihla ngokupheleleyo, kuba oku, okokuqala, akukhuselekile, kwaye okwesibini, kulo mhlaba, phakathi kwabantwana kukho enye ingxabano.
Nangona kunjalo, eli nqanaba aliyi kunceda abazali ukuba baphule iingxabano phakathi kwabantwana, kodwa banokunciphisa inani labo kuphela.
Isigaba sesibini: ngexesha lokuxabana, zama ukuqinisekisa abantwana bakho, uchazela kubo ukuba akufuneki kubekho iimbambano phakathi kwabantu abasondeleyo. Okokuqala, ncokola nomntwana omdala. Mxelele ukuba omncinci ufuna ukudlala kunye nemidlalo yakhe kuphela ngenxa yokuba unomdla, kungekhona ngenxa yokuba ufuna ukucaphuka umzalwana okanye udade omdala ngeendlela zonke. Unokuzama ukuqonda oko kubangela ukuba ucaphuke kunye nomsindo kumntwana omdala. Kuphela ngokufunda ukuqonda abanye kwaye uzibeke kwenye indawo, umntwana wakho uya kulungela isigaba 3 - ukufumana isisombululo.
Isigaba sesithathu: khangela abantwana bakho ngeendlela ezahlukeneyo ongasombulula ngayo ingxaki. Wena, njengomzali, unako ukunika ezininzi iinketho zakho, kodwa kubhetele xa umntwana ecinga ngengxaki kwaye uxelela iindlela zakhe zokusombulula ingxaki. Abantwana abaninzi baya kubandakanywa kule nkqubo, mhlawumbi ukuba abantwana abaza kukwazi ukuziphatha, banako ukwenza isigqibo kwaye bafumane indlela yokuphuma kwimeko.
Kwakhona, umntwana omdala makafunde ukuthi "hayi" kwizwi elincinci, elinesineke nelizolileyo.
Enyanisweni, abantwana abayisebenzisi lonke ixesha ndawonye, ​​bedlala kunye, kodwa ngezinye iimfuneko. Abazali bangahlela yonke into ukuze abantwana babe kwindawo enye, kodwa baya kuba namaqumrhu ahlukeneyo. Ukuze abantwana basebenzisane ukwenza into kunye, okokuqala ungazijoyina umdlalo kubo kwaye udlala ezintathu zazo.
Ukubala kunye neenwele ezintle
Kutheni amadoda engafuni ukulala ngesondo
I-cutlets yenkukhu kunye nama-mushroom
Ukutshintsha okanye ukumkela umntu njengoko unjalo?
Ukuguqulwa kwamanzi kwimeko ebusweni kubantwana
U-Evgeni Plushenko kunzima ukujikeleza eItaly, ividiyo
Ukucoceka ngomlomo kubantwana
Ukupheka okuPhezulu kweeRose Petals
Isaladi kunye neidiliya kunye noshizi
Ukulinganisela kweYin Yang, amahomoni
UMoscow uqalise umxholo omtsha kwi-brand yeMeucci
Ingulube kwi-sauce eluhlaza
Ungatshintsha njani indlu ukuze uqale ukudlala neminye imibala?
Burger esicucu ne-turkey
Kutheni i-bruise ibonakala emva kokusilalisa?
I-Pita ene-cutlets kwi-peas peas
Iifaldi zeli nani
Ubusika obuphathekayo ka-2017-2018. Yintoni enxibayo kunye nendlela enenzuzo yokuhlaziya ikhabethe?
Iinkcukacha ezithandekayo ngokuphathelele ngesondo
Imifuno echwayibhileyo iluncedo?